Brennan O'Connor | Frontier Myanmar
Brennan O’Connor isafreelance photographer and writer based in Southeast Asia, currently working onaphoto book documenting Burma’s border areas. The project has taken him around the region to photograph the numerous rebels, refugees and migrants residing on both sides of the Dividing Lines.
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့နယ်၌ တပ်မတော်၏ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်များက ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်နှင့် ပဋိပက္ခများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားကာ ဒေသခံများအတွက် ခါးသီးသော အမှတ်တရ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့သည်။
Brennan O'Connor ရေးသားသည်။
ရိက္ခာပြတ်မည့်အရေးကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအနာဂတ် မရေမရာဖြစ်နေ
ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၈,၀၀၀ ကျော်အတွက် ထောက်ပံ့ထားသော စားနပ်ရိက္ခာ နောက်ဆုံးခွဲတမ်းသည် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ပြတ်လပ်တော့မည်ဖြစ်ရာ အစိုးရ၏ ပြန်လည်နေရာချထားရေး စီမံချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများက စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများအရ ဆိုးရွားလှသော ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး ပြဿ နာရပ်များကို အရှည်သဖြင့် ရှောင်ရှားရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကြီး သုံးဇုန်ကို တင်းကြပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။